सेण्ट जेभियर्सलाई हटाएर जग्गा हडप्ने रणनीतिमा नवराज सिलवाल - Jhilko
सेण्ट जेभियर्सलाई हटाएर जग्गा हडप्ने रणनीतिमा नवराज सिलवाल
ललितपुर १ का संघीय सांसद नवराज सिलवालको आजकाल त्यति चर्चा छैन । प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नपाएपछि अदालतदेखि धेरैतिर दौडिदा पनि सफल नभएपछि उनी राजनीतिमा होमिए । नेपाली कांग्रेसविरुद्ध जनमत हुने माहौल देखेपछि उनी कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पीडित भन्दै नेकपा प्रवेश गरे । नेकपाले पनि उनलाई न्याय होस भनेर धेरै नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर टिकट दियो र उनी विजयी भए । विजयी भएको केही महिनासम्म उनको चुरीफुरी राम्रै देखियो । आफैले आफैलाई ‘सेलिब्रेटी’ सांसद भन्दै फोटो खिचाएर प्रहरीमा रहदाको नेटवर्क प्रयोग गरी पत्रपत्रिकामा लेख लेखाउने र फोटो हाल्ने काम राम्रैसँग गरे । राम्रै चर्चा भयो । संसदमा उनले उल्लेख्य कुरा बोलेको या कुनै महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गरेको आजसम्म थाहा हुन सकेको छैन । चुनाव सकिएको छ महिनासम्म राम्रै चर्चामा रहेका सांसद सिलवाल आजकाल गुमनामजस्तै छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी गुमनाम भए पनि निर्वाचन क्षेत्रमा भने अनेकौं तिकडम गरिरहेको देखिएको छ । सन् १९५१ मा नेपाल आई शिक्षा सेवा प्रदान गर्दै आएको सेण्ट जेभियर्स स्कूल, गोदावरीलाई लखेट्ने र त्यसले भोगचलन गर्दै आएको जमिन आफू र आफ्ना निकटका मान्ेछलाई हात पार्ने खेल भइरहेको अधिकांश स्थानीयहरुले बताउँदै आएका छन् । उनले यसका लागि स्थानीय भूमाफियाका साथै सरकारी संयन्त्र समेत प्रयोग गरेर स्कूललाई हैरान दिइरहेका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सांसद सिलवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मान्छे हुँ भन्दै आफूले गरेको काममाथि प्रश्न उठाएमा ठीक नहुने धम्कीको शैलीमा सेण्ट जेभियर्सले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत विभिन्न योजना लगेर निर्माण कार्य शुरु गरेका छन् । हाल क्रिकेट रङ्गशालाको काम सकिन थालेको छ । देशको गौरवशाली आयोजना भएकाले त्यसलाई भने पछिल्लो समयमा स्कूल प्रशासनले समेत सहयोग गरेको छ ।
सन् १९५१ मा नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरी तत्कालीन सरकार र जेसुईट फादरहरुकोबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई सेण्ट जेभियर्स, गोदावरी सञ्चालन भएको हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको सेण्ट जेभियर्सले सरकारबाट धेरै जग्गाजमिन भोगचलनको लागि लिएको थियो ।
बि.सं २०६१ सालमा सरकारले बिद्यालयलाई थप जग्गा उपलब्ध गराएपछि विद्यालयले शिक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कार्य गर्न खोजेको थियो । तर, खासगरी जग्गा दलाली गर्ने व्यक्तिहरुले त्यसमा अवरोध गरेका थिए । त्यतिखेरदेखि भएको सामान्य अवरोध कार्यमा सांसद सिलवाल जोडिएपछि अहिले आएर जटिल बनेको छ । सरकारले विद्यालयलाई भोगाधिकार दिएको जग्गामा अर्को निर्णय नगरी जवर्जस्ती रुपमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट रकम लगेर रङ्गशाला बनाइयो । मन्त्रालयबाट बजेट ल्याउने, विद्यालयको भोगाधिकार रहेको जग्गामा अर्कै संरचना गर्ने कामको नेतृत्व सांसद सिलवालले गरेका छन् । स्थानीय केही राजनीतिक कार्यकर्ता र भूमाफियाको सहयोगमा उनले विद्यालयलाई थोरै स्थानमा खुम्च्याउने काम मात्र नगरी बस्न मन नभएमा नबसे हुन्छ भन्ने शैलीमा धम्की दिने गरेको विद्यालयका एक कर्मचारीले बताए । सांसद सिलवालले उनको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको राम्रो विद्यालयलाई सहयोग गरी स्थानीय जनताका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था मिलाउनुको साटो पुर्वाग्रही तवरमा विद्यालयमाथि धावा बोल्ने प्रयत्न गरेका छन् । स्कूलले पाएको जमिनभन्दा थुप्रै अन्य सार्वजनिक जमिन भए पनि सेण्ट जेभियर्सकै जमिनमा आँखा लगाएर सांसद सिलवालले लगातार खेदिरहेका छन् ।
किन रिसाए सांसद सिलवाल ?
सेण्ट जेभियर्स स्कूलले नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले दुई पटक विद्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सुरुमा स्थापना हुँदा जग्गाको भाउ नबढेको र दलाली खासै फस्टाएको थिएन । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद उदय शमशेर राणाको बाबु बाजेले गोदावरीमा सेण्ट जेभियर्स स्कूल ल्याउन भूमिका खेलेका थिए ।
देशभरका विद्यार्थी अध्ययन गरे पनि कतिपयले भने सेण्ट जेभियर्स स्कूल गोदावरीलाई राणाहरुले ल्याएको शिक्षालय भनेर चिन्छन । पछिल्लो चरणमा जग्गाको भाउ बढ्नु र जग्गाको दलाली मौलाएपछि शहर क्षेत्र मात्र होइन देशभरका सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भइरहेको छ । सेण्ट जेभियर्सले भोगाधिकार लिएको जग्गामा पनि दलालहरुको आँखा परेको छ । विद्यालयले भोगाधिकार लिएको जग्गाबाट केही जग्गामा सरकारी भवन, रङ्गशाला जस्ता संरचना निर्माण गरेमा छेउछेउमा सटर थापेर पसल मौलाउने नै भयो । जग्गा दलालहरु सरकारी जग्गा लिज या कुनै वहानामा भाडामा लिएर सटर बनाई व्यापार गर्न लागिपरेका छन् । ती व्यापारीहरुले सांसद सिलवाललाई खुशी बनाउने बचन दिई नेतृत्व गर्न उक्साए । कतिपय त त्यसमा सांसद सिलवालको समेत लगानी रहने अनुमान गर्छन । प्रहरीको माथिल्लो तहमै रहेका बेलामा मिटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने सिलवालले त्यो काम गर्न खोजेका त होइनन् ? स्थानीयले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा छ, तर त्यहाँ रङ्गशाला नबनाई सेण्ट जेभियर्सले भोगाधिकार लिएको जग्गामा नै विभिन्न संरचना बनाई घुमाउरो बाटोबाट व्यापार गर्न खोजेको स्थानीयवासी नै बताउँछन । सांसद सिलवालले प्रतिस्पर्धी उदय शमशेर जबराले सेण्ट जेभियर्सको नाममा राजनीतिक जश लिने गरेको कारण पनि पूर्वाग्रह देखाएको बताइन्छ । राणाले भाषणको क्रममा आफ्नो परिवारले शिक्षामा ध्यान दिएकै कारण नाफारहित स्कूल सेण्ट जेभियर्स गोदावरीमा स्थापना भएको बताउने गरेका छन् । त्यसैगरी सांसद सिलवालले सेण्ट जेभियर्स स्कूलले आफूले भनेको हुबहु नमानेका कारण पनि पूर्वाग्रह साँधेको अनुमान गरिन्छ । सेण्ट जेभियर्सले थोरै सिट निश्चित व्यक्तिहरुको सिफारिसमा भर्ना लिई अधिकांश सिटमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरेको बताइन्छ ।
सांसद सिलवालले त्यो शैलीलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने देखेपछि विद्यालयलाई थोरै क्षेत्रमा खुम्च्याउन वा लखेट्न षडयन्त्र गरेको बताइन्छ । सांसद सिलवाललाई कतिपय विद्यालयले समेत उक्साएको शंका गर्ने गरिएको छ । जे भए पनि सांसद सिलवालले एउटा विद्यालयमाथि जुन षडयन्त्र गरिरहेका छन्, त्यसले उनको प्रतिष्ठा पक्कै पनि बढ्ने छैन । नाम होस बदनाम होस तर गुमनाम नहोस भन्ने उखान अनुसार हिंड्न खोजेका हुन भने बेग्लै कुरा हो ।
सेण्ट जेभियर्स विद्यालय स्थापनादेखि जग्गा भोगाधिकार दिएको कागजात र त्यस यता आदान प्रदान भएका दर्जनौ पत्रको प्रतिलिपि समयवद्ध साप्ताहिकलाई प्राप्त भएको छ । पत्रमा विभिन्न कार्यालयले भोगाधिकारको लागि सेण्ट जेभियर्सलाई दिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सेण्ट जेभियर्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकायलाई पछिल्लो अबस्थाको बारेमा जानकारी गराउंदै पत्र समेत लेखेको छ । जग्गाको घेरावार गर्न शिक्षा कार्यालय ललितपुरले समेत पत्र लेखेको छ । तर तिनै क्षेत्र कब्जा गरेर विभिन्न संरचना बनाउन खोजिएको छ । वि.सं २००८ सालमै बनाइएको क्वार्टरमा समेत डोजर प्रयोग गरेर सेण्ट जेभियर्सलाई दुःख दिन खोजिएको छ । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख लगायतका स्थानीय वुद्धिजीवि र समाजसेवी सेण्ट जेभियर्सलाई दुःख दिन नहुने पक्षमा छन ।
तर केही व्यक्तिको झुण्ड समातेका सांसद सिलवालले प्रधानमन्त्री ओलीदेखि बिभिन्न व्यक्तिको नाम लिएर विकासको नाममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । सांसद सिलवालले कम्युनिष्ट सरकारले सेण्ट जेभियर्सलाई दुःख दियो र खेद्न खोज्यो भन्ने नारा उराल्ने षडयन्त्र गराउन प्रयास गरेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ । सांसद सिलवाललाई पार्टीको माया नभएको कारण यस्तो गरेनन् भन्न पनि सकिदैन ।
सांसद सिलवालको बलमिच्याईले विद्यालयले विभिन्न निकायमा दिएको उजुरी सुनुवाई हुने आशामा देखिन्छन, सोही विद्यालयका विद्यार्थी र कर्मचारीहरु । अदालतमा पनि मुद्दा दायर भएको छ । त्यसले पनि पक्कै निकास दिनै नै छ । तर अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, गैह्रराजनीतिक व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदाका समस्या गोदावरी क्षेत्रका स्थानीयवासीले पनि देख्न पाएका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
अस्पतालमा कोरोना सुरक्षाको व्यवस्था नाजुक
कोरोनाबारे जी ट्वेन्टीको भिडियो कन्फ्रेन्स गराउन भारत र साउदी अरब सहमत
मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाले यहाँका मगन्तेलाई व्यवस्थापन गर्दै बेसहारालाई...
‘हिमाली चितुवा’ नामले परिचित घिमिरेले जापानमा आइतबार सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ...
कञ्चनपुर जिल्ला ‘ लक डाउन’ घरबाहिर निस्किए कारबाही !
कञ्चनपुर प्रशासनले आज राति १२ बजेबाट आकस्मिक उपचारबाहेक घरबाट ननिस्कन ‘कफ्र्यू’...
तनहुँका चार स्थानमा क्लष्टर निर्माण गरिँदै
जिल्लालाई कोरोनामुक्त जिल्ला बनाउनक लागि जिल्लाका प्रवेश नाकामा क्लष्टर निर्माण...